EVY's Kitchen: Marble Cake with Mixed Fruits
ဒီမုန့်မျိုးကို အရင်တုန်းကလည်း လုပ်ဖူးပါတယ်။ တနဂ်နွေနေ့ခင်း ကော်ဖီသောက်ချိန်အမီ လုပ်လိုက်တဲ့မုန့်လေးပါ။ ကိတ်မုန့်မလုပ်ပဲနေမယ်ဆိုပြီး အားတင်းထားတာ ဒီနေ့တော့မရတော့ဘူး။ ၀မှသာဝရော ဆိုပြီးမျက်စေ့မှိတ်ပြီးလုပ်လိုက်ပြီ။ လုပ်နည်းကတော့ အရင်တုန်းကဟာ ပြန်ကူးပေးလိုက်ပါတယ် ။ အချိုးအဆလေးတွေနဲနဲတော့ ပြောင်းထားတယ်။
160 grams all purpose flour + 2tbsp of Cocoa powder
140 grams castor white sugar
Grease the baking tray and line with parchment paper.
Sift together the flour and baking powder. Set aside
Add the eggs , one atatime, beating well after each addition. Scrape down the sides of the bowl.
Inaclean bowl, Mix2Tbsp of Cocoa power with 1 Tbsp of oil.
Transfer the half of the batter into Cocoa+ oil mixture and mix it well. Now you have one portion of white and the other portion of chocolate batter.
Pour the 1/2 of the white batter into the cake pan and spread it evenly. Then, pour in the 1/2 of the chocolate batter and smooth the surface.Repeat the process until all the batters are being used. Bake in the preheated 160 degree oven for 50 minutes,oratoothpick inserted into the cake comes out clean
ကြီးကြီးမြင်ရအောင် ပုံတွေကိုအကြီးလုပ်ပြီးတင်လိုက်တာ။ သိပ်ပြီးပြူးတူးပြဲတဲ ဖြစ်နေရင် ပြောကြပါ။
Posted by Evy at 5:44 PM
အဲလိုမုန့်လေးတွေလုပ်တတ်ချင်လိုက်တာ.. အိမ်က ခလေးတွေသိပ်ကြိုက်မှာသေချာတယ်...
ကျမတော့ အခုတလောမုန့် မဖုတ်ဖြစ်ဘူး။
ဒီနေ့ တော့ အပြင်က၀ယ်လိုက်တယ်။
၀န်ခံရရင် တစ်ခါမှ မုန့်မဖုတ်ဖူးဘူး
အမတော့ မုန့််ဖုတ် မကျွမ်းဘူးရယ်
အိမ်နီးချင်း ဖြစ်ချင်ပါ၏း)
အစ်မလို မုန့်ဖုတ်တတ်ချင်လိုက်တာ.. အိမ်မှာ ဖုတ်တာ.. ဖုတ်တိုင်း ပျက်တယ်။ နောက်တော့ စိတ်ဓါတ်ကျပြီး မဖုတ်တော့ဘူး။ အစပ် မတော်လို့နဲ့တူတယ်။ အိမ်မှာ food weight machine လည်း မရှိတော့..။